Hezekaya nwere mkpebi dị oké mkpa ọ ga-eme ná ndụ ya. Ọ ghọrọ eze Juda mgbe ọ dị afọ iri abụọ na ise. Olee ụdị eze ọ ga-abụ? Ọ̀ ga-eme ihe ọjọọ nna ya bụ́ Eze Ehaz mere? Ruo mgbe Ehaz nwụrụ, ọ hapụrụ ife Chineke ma jụ ichegharị. O bu ikpere arụsị n’isi, kpọọkwa ọ dịkarịa ala otu n’ime ụmụnne Hezekaya ọkụ n’ebe a na-achụrụ arụsị àjà. (2 Ihe E Mere 28:1-4) Otú ọ dị, Hezekaya ekweghị ka omume ihu abụọ papa ya mee ka ife Jehova gwụ ya ike, ma ọ bụkwanụ mee ka o chee na ya ga-emerịrị ihe ọjọọ papa ya mere. Kama nke ahụ, Hezekaya ‘rapaara Jehova n’ahụ́.’—2 Ndị Eze 18:6.
Papa gị ma ọ bụ mama gị ọ̀ na-eji ofufe Jehova eme ihe ọchị? Ọ̀ na-akpọ mmadụ iyi, ka è nwere omume ọjọọ riri ya ahụ́? Ya bụrụ otú ahụ, ọ bụghị iwu na ị ga-eme ihe ahụ ọ na-eme! Hezekaya biri ezi ndụ n’agbanyeghị ihe nlereanya ọjọọ ọ hụrụ n’ezinụlọ ha. N’eziokwu, ọ ghọrọ ezigbo eze, nke mere na “mgbe ọ nwụsịrị, ọ dịghị onye dị ka ya n’ime ndị eze niile nke Juda.” (2 Ndị Eze 18:5) Dị ka Hezekaya, ị ga-emeli ka ihe dịrị gị mma ná ndụ n’agbanyeghị nsogbu dị n’ezinụlọ unu. Olee otú ị ga-esi eme ya? ‘Rapagidesie ike n’ahụ́ Jehova.’
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Onye M Ga-eṅomi—Hezekaya
yp2 p. 193